Tag: drip » Martech Zone
Fotoana famakiana: 3 minitra Ny sehatra Ecommerce Customer Relation Management dia mamorona fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny fivarotana ecommerce sy ny mpanjifany amin'ny traikefa tsy hay hadinoina izay hitarika ny tsy fivadihana sy ny vola miditra. ECRM dia manome pahefana mahery kokoa noho ny mpamatsy tolotra mailaka (ESP) ary mifantoka kokoa amin'ny mpanjifa noho ny sehatra fifandraisan'ny mpanjifa (CRM). Inona no atao hoe ECRM? Ny ECRM dia manome fahefana ny tompona fivarotana an-tserasera hahatakatra ny mpanjifa tokana rehetra — ny tombotsoany, ny fividianana ary ny fitondran-tenany — ary hanome traikefa mpanjifa misy dikany manokana amin'ny alàlan'ny fampiasana angon-drakitry ny mpanjifa voaangona manerana ny fantsom-barotra rehetra.
Hanova Pro: Plugin ho an'ny pop-up opt-In Opt-In ho an'ny WordPress
Alatsinainy Oktobra 19, 2020 Alarobia, Desambra 23, 2020 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 3 minitra Raha jerena ny fanjakan'ny WordPress amin'ny maha rafitra fitantanana atiny azy dia mahagaga fa tsy dia misy fandinihana firy amin'ny sehatra fototra amin'ny tena fanovana. Saika ny famoahana rehetra - na orinasa izany na bilaogy manokana - dia toa manova ny mpitsidika ho mpanjifa na ho avy. Na izany aza, tsy misy singa ao anatin'ny sehatra fototra ahafahana mandray ity hetsika ity. Convert Pro dia plugin WordPress feno izay manome drag & drop editor, mamaly ny finday
Alatsinainy, Jolay 13, 2020 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Ireo tranonkala izay manampy sora-baventy porofo ara-tsosialy mivantana dia manatsara ny taham-panovana sy ny fahatokisan'izy ireo. Pulse dia ahafahan'ny orinasa mampiseho fampandrenesana momba ny tena olona mandray andraikitra amin'ny tranokalany. Tranonkala mihoatra ny 20,000 10 no mampiasa Pulse ary mahazo fihenam-bidy XNUMX% eo ho eo. Ny toerana sy ny faharetan'ny fampandrenesana dia azo namboarina tanteraka ary, na dia misarika ny sain'ny mpitsidika aza izy ireo, dia tsy mampiala ny sain'ny lavitra amin'ny tanjona misy ilay mpitsidika. Mahafinaritra
Fotoana famakiana: 2 minitra Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia ao amin'ny Squarespace, rafitra fitantanana atiny izay manome ny fototra rehetra - ao anatin'izany ny ecommerce. Ho an'ireo mpanjifa manompo tena dia sehatra lehibe misy safidy maro izy ity. Matetika izahay dia manome soso-kevitra amin'ny fampiantranoana WordPress noho ny fahaiza-manaony sy ny fahalalahany tsy voafetra… fa ho an'ny sasany ny Squarespace dia safidy matanjaka. Na dia tsy ampy ao amin'ny Squarespace aza ny API sy fampidirana novokarina an-tapitrisany izay vonona ny handeha, dia mbola afaka mahita fitaovana mahafinaritra sasany hanatsarana ny tranokalanao ianao. izahay